Ahoana no ahamety kokoa ny fandefasana bilaogy tsara kokoa aminao | Martech Zone
Ahoana no ahamety kokoa ny fandefasana bilaogy tsara kokoa aminao
Alakamisy Febroary 28, 2013 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Nikhil Raj
Ok, io lohateny io dia mety hamitaka kely. Saingy nahasarika ny sainao izany ary nahatonga anao hanindry ilay lahatsoratra, sa tsy izany? Antsoina hoe linkbait izany. Tsy nahita lohateny lahatsoratra bilaogy mafana toy izany izahay raha tsy nisy fanampiana… nampiasainay Generator an'ny atiny ao amin'ny Portent.
Ireo olon-kendry fambara efa nanambara ahoana ny hevitra ho an'ny mpamokatra herinaratra tonga. Fitaovana lehibe ahazoam-bola teknika linkbaiting izay nozahana sy marina:
Ego hook - mizara votoaty ny olona rehefa miantsoantso mafy ianao.
Fanafihana fanafihana - amin'ny alàlan'ny fandehan-javatra manafintohina dia afaka miteraka fahalianana ianao.
Loharanom-pitaovana - loharano lehibe dia hevitra vontoaty tsara foana!
Fantsom-baovao - Ny lohahevitra malaza dia mitondra tsindry bebe kokoa.
Kaody mifanohitra - mamorona ady hevitra ary manana ny masonao mifanohitra amin'izany ianao.
Hehy hook - Mamaky ity lahatsoratra ity ianao, sa tsy izany?
Zava-dehibe amin'ny votoatinao ny lohateny. Ny tena tiako indrindra amin'ity fitaovana ity dia ny tsy fananganana lohateny an-kisendrasendra fotsiny, fa izy io koa dia manazava ny antony fiasan'ny lohateny hoe linkbait. Tsy tonga lafatra isak'izay, fa mahafinaritra ary manome hevitra atiny mahatalanjona ampy hanoratanao an'ity lahatsoratra ity momba azy!
Andramo ny Generator Idea maimaim-poana ao Portent
Tags: mpamorona hevitra atinympamorona hevitralinkbaitteknika linkbaitingfambara
Nikhil Raj dia manana traikefa 7+ taona amin'ny SEO sy Marketing Marketing. Niara-niasa mivantana izy Douglas Karr mitantana mpanjifa isam-paritra sy nasionaly miaraka amin'ny fanatsarana motera fikarohana eo an-toerana, nasionaly, ary iraisam-pirenena.
Valin'ny fanadihadiana CMO